गणेश हिमाल क्याम्पसलाई जिल्लाकै उत्कृष्ठ बनाउनको लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक र व्यवस्थापकको त्रिकोणात्मक भूमिका रहेको छ : क्याम्पस प्रमुख पाण्डे - Radio Bihani
गणेश हिमाल क्याम्पसलाई जिल्लाकै उत्कृष्ठ बनाउनको लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक र व्यवस्थापकको त्रिकोणात्मक भूमिका रहेको छ : क्याम्पस प्रमुख पाण्डे
१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १९:३१
धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेसीमा २०५३ सालमा धादिङ बोर्डिङ स्कुल खुल्यो । संस्थागत विद्यालयको रुपमा खुलेको यस विद्यालय बिस्तारित हुँदै जादा न्यु धादिङ बोर्डिङ स्कुल र गणेश हिमाल क्याम्पसको रुपमा हाल सञ्चालित छ । जिल्लामा मात्र नभइ राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्ठित यस क्याम्पस र विद्यालयहरुको नतिजालाई हेर्ने हो भने जिल्लाको सर्वाकृष्ठ मानिन्छ । कार्यक्रम विहानी संवादमा गणेश हिमाल क्याम्प्स धादिङका क्याम्पस प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पाण्डेसँग गणेश हिमाल क्याम्पसले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिहरु र नीजि क्षेत्रबाट विद्यालय अथवा क्याम्पस सञ्चालन गर्न कतिको कठिनाइ रहेको छ ? यस्तै क्याम्पसको आगामी कार्यक्रमहरुको बारेमा प्रस्तोता सञ्जय देवकाटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अशं
गणेश हिमाल क्याम्पस, धादिङ बोर्डिङ स्कुल, न्यु धादिङ बोर्डिङ स्कुल गरी तीन वटा संस्था सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ । कत्तिको सहज छ ? यी संस्थाहरु सञ्चालन गर्न ?
अहिलेसम्म हामीलाई संस्था सञ्चालन गर्न कुने अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको छैन । नैतिक जिम्मेवारी र काममा इमान्दारिता भएपछि हामीलाई अभिभावकहरुले हामीमाथि विश्वास गर्नुभएको छ । जिल्लाकै उत्कृष्ठ विद्यालय भएको कारण विद्यार्थीहरुको अवस्था राम्रो छ । त्यस्तै व्यवस्थापकज्युहरुले पनि राम्रोसँग संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ । विद्यालय र क्याम्पस सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुभएको छ । त्यसैले गर्दा पनि हामीले सहज भएको महसुस गरिरहेका छौँ ।
विद्यालय तथा क्याम्पसको सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ तपाईँ । विद्यालय स्थापनादेखि हालसम्मको समयको समीक्षा गर्नुप¥यो भने कसरी गर्नुहुन्छ ?
२०५३ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय धादिङ जिल्लाको नीजि विद्यालयहरुमा दोस्रो विद्यालय हो । सुरुको स्थापना कालमा म यसको सदस्य नभएता पनि सुरुमा ८ जना धादिङ जिल्लाका शिक्षाविदहरुद्धारा सञ्चालन भएको हो । सुरुको समयदेखि नै शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले विद्यालयलाई धेरै राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नुभयो । त्यस्तै धादिङ जिल्लामा सबैभन्दा राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यालयको नाममा पनि धादिङ बोर्डिङ अगाडि आउन सफल भएको छ । २०६२÷६३ मा हामी सहभागी भएपछि तत्कालीन अवस्थामा समस्या भनेको जनआन्दोलनताका शैक्षिक क्षेत्र, नीजि क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिन्थ्यो । तर साथीहरुले जिम्मेवारीका साथ वार्ता र छलफलबाट समस्याको समधान गर्नुभयो । हामीसँग धेरै चुनौतीहरु थिए । पहिलो त विद्यालय स्थापनाकालमा जम्मा ३०० विद्यार्थी हामीकहाँ थिए । तत्कालीन अवस्थामा शिक्षकहरुलाई तलब दिन पनि धौ धौ थियो । हामीले विभिन्न शिक्षाविदहरुसँग छलफल, बहस गरी अभिभावकको माया जित्न सफल भयौँ । हामीले ७०० विद्यार्थी विद्यालयमा पाउन थाल्यौँ । सिरान बजारमा विद्यालय रहेका कारण विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो भएको भन्ने गुनासो आएसँगै हामीले २०६५ सालमा न्यु धादिङ बोर्डिङ स्कुल स्थापना ग¥यौँ । अहिले धादिङ बोर्डिङ, न्यु धादिङ बोर्डिङ र गणेश हिमाल क्याम्पस गरी ३ वटा संस्था हामीकहाँ छ । यी ३ संस्थामा लगभग अहिले २ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
अरु विद्यालयले पनि यत्तिकै मेहनत गरेका छन् । लगानी उत्तिकै छ । यहाँहरुको नतिजा जिल्लामै उत्कृष्ट आइरहेको छ । यो कसरी सम्भव भयो ?
नतिजा राम्रो ल्याउनको लागि वास्तवमा विद्यार्थी, शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन जरुरी छ । त्यस्तै शिक्षकहरुले पनि विद्यार्थीहरुको चाहना अनुसार पढाउने र व्यवस्थापकले सही समयमा विभिन्न कुराहरु सुधार गर्दै लाने हो भने विद्यालय तथा क्याम्पसको गुणस्तर राम्रो हुँदै जान्छ ।
नीलकण्ठ क्याम्पसमा पनि सहायक क्याम्पस प्रमुख भएर लामो समय काम गर्नुभयो । अहिले गणेश हिमाल क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ । कत्तिको गाह्रो छ क्याम्पस सञ्चालन गर्न ?
क्याम्पस प्रमुख भन्ने शब्द नै कठिन लाग्छ मलाई । धेरै वर्ष मैले नीलकण्ठ क्याम्पसको प्रशासनिक क्षेत्रमा सहायक क्याम्पस प्रमुख भएर काम गरेँ । त्यसपछि गणेश हिमाल क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख भएर काम गरेँ । नीजि र सरकारी क्याम्पसको प्रशासनमा रहेर काम गर्दा धेरै फरक पाएँ । सरकारीमा काम गर्दा राजनीतिक दलहरु, स्थानीय तह सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने, विद्यार्थी संघ सङ्गठनहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो तर नीजि क्षेत्रमा जाँदा मलाई लागेको कुरा राजनीतिक दलसँगको भाइचारा त आफ्नो ठाउँमा छदैँ छ तर स्कुल, कलेजमा उहाँहरुले हस्तक्षेप नगर्ने हुँदा सजिलो छ । धादिङका सबै विद्यार्थीहरु आर्थिक रुपले सबल छैनन् । त्यसो हँदा स्कुलले छात्रवृत्ति दिए हुन्थ्यो सहुलियतमा पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना विद्यार्थीहरुको छ । अन्य कुरामा जुनसुकै काम गर्न पनि कठिन त कठिन नै छ । हामी सबै मिलेर व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने कुनै पनि काम गर्न कठिन र असहज हुदैन । व्यवस्थापकीय, आर्थिक पाटोमा समस्या नै देखिन्छ । उता राम्रा विद्यार्थीहरु विदेशीने कुनै विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यालय नै नआउने जस्ता समस्या पनि धेरै देखिन्छ । ४ वर्ष व्याचलर पढेर के गर्ने ? जागिरको ग्यारेन्टी हुदैन भन्ने जुन मनस्थिति विद्यार्थीहरुमा छ यिनै कारणले क्याम्पसमा विद्यार्थी घटेको देखिन्छ । ग्रामीण भेगबाट आउने विद्यार्थीहरु आर्थिक हिसाबले कमजोर देखिन्छन् । यी यस्ता थुप्रै समस्याहरुलाई चिर्दै विद्यार्थीहरुले पढेको विषय अनुसार काम पाउने गरी प्राविधिक शिक्षा पढाउनको लागि पहल गरेका छौँ । त्यस्तै हामीले कक्षा ११÷१२ मा कानुन विषय राखेका छौँ । पहिला त हामीलाई डर पनि लागेको थियो । विद्यार्थी नहुने पो हो कि भनेर तर पछि विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेको देखिन्छ । कति विद्यार्थीहरु बुझेर आए त कति कानुन भनेको के हो ? नबुझेरै आए । अहिले ३३ जना विद्यार्थीहरु कानुन संकायमा पढ्दै छन् । मलाई लाग्छ आगामी वर्षमा कानुन पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्याहरु बढ्ने छ । हामीले अरु विषयजस्तै विज्ञान संकाय महत्त्वपूर्ण रहेको कारण कक्षा ११ मा विज्ञान विषय राख्ने भन्ने योजना छ । हाम्रो विद्यालयमा कक्षा ११ बाट नै चयन गर्ने विषयमा विज्ञान राखेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेको ९, १० कक्षा पास गरिसकेपछि विज्ञान संकाय पढ्नको लागि अर्को विद्यालय जान नपर्ने गरी धादिङ बोर्डिङमै रहोस् भन्ने उद्देश्य हो ।
विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद, सामाजिक कार्यमा अगाडि बढाउने, संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजहरुमा सहभागी गराउने खालका अतिरिक्त क्रियाकलापहरु कतिको गर्नु भएको छ ?
विद्यालयमा अतिरिक्त कार्यक्रम अभिन्न अङ्ग हो । शैक्षिक पाटो एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भने हामीले क्यालेन्डरमा उल्लेख भएका हरेक कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतारेका छौँ । हरेक शुक्रबार अतिरिक्त कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ । चेतनाको स्तर, सामाजिकसेवाको भावना जागृत गराउने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ । उदाहरणको लागि योगा कक्षा, खेलकुद कार्यक्रम, नृत्य, सङ्गीत, तेक्वान्दो जस्ता खेलकुदहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यस्तै हामीले उनीहरुलाई सामाजिक कामहरुमा पनि सहभागी गराउँछौँ । जस्तै रक्तदान गर्ने कार्यक्रम राख्छौँ । टोल सरसफाइमा पनि उनीहरु स्वयमसेवक भएर काम गर्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले संस्थाप्रति उत्तरदायी बनाएका छौँ । सामाजिक सहयोगको भावना सबै क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुलाई उत्कृष्ठ बनाएका छौँ ।
आजभोलि विद्यार्थीहरुको पढ्ने बानी हट्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बढी ध्यान गएको जस्तो देखिन्छ । विद्यार्थीहरुको पढाइप्रति रुचि कम भएको नै हो ?
पढ्ने तरिकामा पनि केही फरक आएको छ । पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरुले मोबाइलबाट धेरै कुरा सिक्ने भएकाले पनि मोबाइलबाट पढ्ने गर्दछन् तर विद्यार्थीहरु सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय भएको देखिन्छ । हामीले ११÷१२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा मोवाइल फोन प्रयोग गर्न दिएका छैनौ । घरमा हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरुको पढ्ने वातावरण नै छ्रैन । बच्चाहरु होम ओर्क गर्छन् तर खाली समय भएपछि टेलिभिजन अथवा मोबाइमाल गेम खेलेर समयको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् । धादिङ बोर्डिङमा हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरुको पढाइमा खोट लाउने ठाउँ देखिदैन । नतिजा सबैभन्दा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् । त्यस्तै धादिङ बोर्डिङ पढ्न चाहने तर शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरुका लागि पनि हामीले सहयोग गछौैँ । तपाईहरु सबैको साथ र सहयोग पाइयो भने नेपालको एक गुणस्तर विद्यालयको रुपमा चिनाउन हामी सफल हुन्छौँ ।
अन्त्यमा एस.इ.इ दिएका तथा कक्षा १२ सकेर बसेका विद्यार्थीहरुले किन गणेश हिमाल क्याम्पस नै रोज्ने ?
वास्तवमा हामीले विद्यार्थीहरुलाई तपाईँहरु गणेश हिमाल क्याम्पस नै आउनु भन्छौँ । गणेश हिमाल क्याम्पस आउनुका केही कारणहरु छन् । पहिलो त गणेश हिमाल क्याम्पसको शैक्षिक नतिजा हेर्ने हो भने पनि जिल्लामै अग्र स्थानमा छ । हरेक वर्ष हाम्रो नतिजा उत्कृष्ट छ । अत्यन्तै अनुभवी प्राध्यापकहरुबाट प्राध्यापन गरिने हुँदा नतिजामा कहिले पनि हाम्रो क्याम्पस पछाडि परेको छैन । पढ्नका लागि तपाईँहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने पनि हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाएका छौँ । गणेश हिमाल क्याम्पस नीजि संस्था भएता पनि नाफामूलक नभइ सेवामूलक संस्थाको रुपमा विकास गरेका छौँ । अर्को विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागि हामीले घरायसी वातावरण बनाएका छौँ । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक स्तरलाई हामी जहिले पनि माथिल्लो स्तरमा राख्छौँ । त्यसैले पनि तपाईँहरु गणेश हिमाल क्याम्पस नै रोज्नु होला भनेर सम्पूर्ण अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई भन्न चाहन्छु । हामीले विद्यार्थीका हरेक क्षमता र उहाँहरुको हरेक चाहनालाई पहिचान गरेर अवसर सृजना गरेका छौँ । विद्यार्थीहरुको मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेर विद्यार्थीहरुलाई सन्तुष्टीका साथ शिक्षण गर्ने सीप हाम्रो प्राध्यापकहरुमा छ । त्यसकारण त्यो सीपको सदुपयोग गर्नका लागि गणेश हिमाल क्याम्पस नै रोज्नुहोस् भन्ने अनुरोध सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई गर्दछु ।